Horudhac: Manchester City vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Manchester Derby) – Gool FM
(Manchester) 07 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad maanta oo Sabti ah ku soo dhoweynaysa Manchester United, waxaana uu noqon doonaa kulankii 179-aad ee Manchester Derby, labada kooxood ayaana guulo soo qaatay kulamadii ugu dambeeyey.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ayaa 4-1 uga soo adkaatay naadiga Burnley oo ay ku booqatay Turf Moor, iyadoo dib ugu soo laabatay wadada guusha, halka Man United ay 2-1 uga adkaatay Tottenham Hotspur oo uu watay macallinkoodii hore ee Jose Mourinho, kaasoo markiisii ugu horreeyey dib ugu soo laabtay Old Trafford.
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester City, Ilkay Gundogan ayaa diyaar ah kaddib markii uu ganaax ka soo laabtay, halka Oleksandr Zinchenko uu taam yahay kaddib qalliin looga sameeyey jilibka.
Weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero ayaa markale ka sii maqnaanaya kooxda Manchester City.
Weeraryahanka Manchester United ee Anthony Martial ayaa si dhaqso leh uga soo laaban kara dhaawicii yaraa ee sababay inuu seego kulankii Arbacadii ay ka badiyeen Spurs, inkastoo shaki laga galinayo kulankan.
Paul Pogba ayaa maqan maxaa yeelay waxa uu sii wadayaa ka soo kabashada dhaawaca canqowga ah oo uu la maqan yahay, halka laacibka khadka dhexe ee Nemanja Matic uu qarka u saaran yahay inuu taam noqdo.
>- Kaliya Chelsea (18) ayaa guulo ka badan Premier League gaartay kulammada ay wajahday Man United in ka badan Man City oo haysata (15) guulahaas ayaana yimid siddeedii sano ee ugu dambeeyey.
>- Man Utd ayaa kaliya hal jeer khasaartay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka booqatay kooxda Man City, waxaana ay saddexda kale ka haysataa 2 guuldarro iyo 1 barbaro, inkastoo xilli ciyaareedkii hore ay ku adkaatay 1-3.
>- Man City ayaa guuleysatay 24 ka mid ah 27-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana saddexda kulan ee kala ay la kulantay 1 barbaro iyo 2 guuldarro, Citizens ayaana mudadaas dhalisay 81 gool, waxaana ay ku guuldarreysteen in wax gool ah dhaliyaan hal kulan.
>- Manchester United ayaa guul gaartay kaliya mid ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxaana ay barbaro gashay 4 kulan, halka laga soo adkaaday 6 kulan, iyadoo aan shabaqeeda gool ka ilaashay 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey, markii ugu dambeysay oo kulamo badan iyadoo Away ah horyaalka laga soo dhaliyey goolal waxay ahayd bishii April sanadkii 1986-kii, markaasoo goolal looga soo dhaliyey bannaanka 15 kulan.
>- Manchester United ayaa guuldarro la’aan ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League la ciyaartay kooxaha waa weyn ee ‘big six’ waxaana ay ka haysataa 2 guul iyo 3 barbaro, waxaana ku jira dhammaan kulamadii ay lixda kooxood ee sare la ciyaartay kal ciyaareekdan 2019-20, markii ugu dambeysay oo lix kulan oo xiriir ah ay guuldarro la’aan ahaato kooxha waa weyn waxay ahayd bishii Maarso sanadkii 2016-kii, markaasoo uu kooxda tababare u ahaa Louis van Gaal.
>- Macallin Pep Guadiola ayaa guul gaaray afar ka mid ah lixdiisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo uu wajahay Man United, waxaana labada kulan oo kale uu ka haystaa 1 guuldarro iyo 1 barbaro.